China Wt004 Jacket factory sy mpanamboatra | Eigday
Anarana: palitao mafana
Sampan-draharaha: Lehilahy sy vehivavy
Fotoana fiaretana: fanafanana hatramin'ny 10 ora
Ny palitao mafana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy dia vita amin'ny kalitao avo lenta
velvetana mitambatra anatiny sy fanafanana manan-tsaina hampahafana. mihinjitra
lamba manome aina anao ary tsy tery. Ny hoodie mafana dia mety. Nandritra ny fotoana maro ary ho safidy tsara ho anao amin'ny toetr'andro mangatsiaka.
Antsipiriany misimisy momba ny palitao manafana anay
Ahoana ny fampiasana ny akanjo mafana?
Tsindrio ary tazomy ny bokotra switch amin'ny palitao fanafanana mandritra ny 3-5 segondra.
Hena 3zona: tratra havia, tratra ankavanana ary ny lamosina
Haavo ny maripana 3
Jiro mena / hafanana ambony: 55 ℃ - 65
Fahazavana fotsy / maripana antonony: 45 ℃ - 55 ℃
Jiro manga / maripana ambany: 38 ℃ - 45
Battery azo antoka
Ny voltakan'ny bateria 7.4V 5200mAh dia ambany lavitra noho ny tanjaky ny fiarovana ny vatan'olombelona.
Cuffs azo ovaina
Velcro elastika famolavolana amin'ny cuffs ho mora fanitsiana ny haben'ny cuff.
Paosy 2 ho anao hitahiry zavatra kely toy ny finday, vola sns, ny paosy hafa dia ho an'ny batery.
[HEATING SAFIDY] Ity palitao manafana ity dia afaka mifehy ny mari-pana amin'ny fomba 3 samihafa. Ny mari-pana dia manodidina ny 65 ℃. Ny mari-pana antonony dia manodidina ny 50 ℃. Ny mari-pana ambany dia manodidina ny 40 ℃.
[FABRIKA MAHAFINARITRA] Malemy sy miaina ny lamban'ny hoodie nohafanaintsika. Ny hoodie dia manana faritra miisa 7 izay azo hafanaina ao anatin'ny segondra vitsy ary maharitra hatramin'ny adiny folo raha feno tanteraka.
[CONVENIENT & SAFE] Ny Heated Jacket dia manana mpampita herinaratra DC ho an'ny famahanana mora. Rehefa mahatratra 65 ℃ ny mari-pana anatiny an'ny Heated Jacket, dia mijanona tsy mihetsika ny rafitra.
[TRANO MORA TSARA] Ny palitao hafanaintsika dia tsy vitan'ny voasasana tanana fotsiny, fa azo soloina amin'ny milina koa. Aza adino ny manala ny batterie alohan'ny fanasana.
[VARIOUS samihafa] Ny akanjo mafana dia fanomezana mety tsara ho an'ny havana, namana ary olon-tiana. Ity akanjo moto hemat ity dia mety tsara amin'ny hetsika ivelany toy ny fitsangantsangana, ski, fanjonoana, ary asa aman-draharaha.
Teo aloha: Palitao midina Wt003
Manaraka: Fonon-tànana miakatra bateria S67B
Vehivavy akanjo ba mafana SHV06P